Sawirro: Kerry oo kulan qarsoodi ah la qaatay saraakiil Iranian ah - Caasimada Online
Home Dunida Sawirro: Kerry oo kulan qarsoodi ah la qaatay saraakiil Iranian ah
Sawirro: Kerry oo kulan qarsoodi ah la qaatay saraakiil Iranian ah
Warbaahinta Mareykanka ayaa todobaadkan si aad ah u hadal heysa kulan qarsoodi ah oo xoghayihii hore ee arimaha dibadda John Kerry uu la qaatay wasiirka arimaha dibadda ee Iran Javad Zariif, oo looga hadlay heshiiskii Nuclear-ka Iran oo Trump uu kabaxay.
Kulankan ayaa ka dhacay Magaalada Paris ee dalka Frence waxaana sidoo kale John Kerry la kulmay Kamal Kharazi oo horay u ahaa wasiirkii hore ee arimaha dibadda.
Mr Kamal Kharazi ayaa sidoo kale kamid ah xubno loo magaacabay goalha xeriirka caalamiga ee dalka Iran waxaana magaacabay Ali Khamenei .
John Carry ayaa Iran u Muujiyay sida uu kaga xun yahay heshiiska uu kabaxay Donald Trump, waxaana uu sheegay in six un looga tashtay go’aankaasi.
Todobaadkii hore waxa uu Trump ka baxay heshiis Iran ay la galeen quwadaha caalamka sanadii 2015-kii, kaa oo ku saabsan Barnaamijkeeda Nuclear-ka.
Sawiradan qarsoodi ah waxaa qaaday Jason Osborne oo horay u ahaa ninka qudbadaha u qora Trump, waxaana uu sawiray John Kerry oo ka sii tagaya kadib markii uu kulan la qaatay Jaml Kharazi oo la shaqeeya safaaradda Iran ee Frence , Abul Qassem Delfi oo ah agaasimaha istartijiyda arimaha Dibadda Iran iyo Abdul Rheda Fargi Rad oo ah sarkaal ka tirsan waaxda arimaha dibadda Iran.
By:Abdiaziz Hassan Ibrahim (Loyal)